रोज्नुहोस सम्पादन गर्नुहोस - नेभिगेटर
मा मानक पट्टी, क्लिक गर्नुहोस
नेभिगेटर खोल्नका लागि, रोज्नुहोस् गर्नुहोस् सम्पादन - नेभिगेटर. नेभिगेटर लैजानका लागि, यसको शीर्षक पट्टी तान्नुहोस्. नेभिगेटर डक गर्नका लागि, यसको शीर्षक पट्टी कार्यस्थानको बायाँ वा दायाँ कुनामा तान्नुहोस्. नेभिगेटर अनडक गर्नका लागि, नेभिगेटरको खाली क्षेत्रमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्.
योगफल सङ्केत (+) नेभिगेटरको कोटिको पछिमा क्लिक गर्नुहोस् कोटिमा वस्तुहरू अवलोकन गर्नका लागि. कोटिमा वस्तुहरूको सङ्ख्या अवलोकन गर्नका लागि, नेभिगेटरमा कोटि माथि माउस सूचक राख्नुहोस्. कागजातको वस्तुमा जानका लागि, नेभिगेटरको वस्तुमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्.
कागजातको अर्को वा अघिल्लो वस्तुमा जानका लागि, क्लिक गर्नुहोस् नेभिगेसन प्रतिमा नेभिगेसन उपकरणपट्टी खोल्नका लागि, वस्तु कोटि क्लिक गर्नुहोस्, र माथि वा तल बाँणहरू क्लिक गर्नुहोस्.
कागजातमा लुकेको सेक्सन नेभिगेटरमा ग्रे देखिन्छ, र पाठ "hidden" प्रदर्शन गर्दछ जब तपाईँं यस माथि माउस सूचक राख्नुहुन्छ. पृष्ठ शैलीहरूको सामाग्रीहरूको हेडर र फुटरमा उस्तै लागूहरू जुन कागजातमा प्रयोग गरिएको छैन, र तालिकाहरूमा लुकेको सामाग्रीहरू, पाठ फ्रेमहरू, ग्राफिक्स, OLE वस्तुहरू, र अनुक्रमणिकाहरू.
मुख्य दृश्य सामान्य दृश्यहरू बिचको स्विचहरू, यदि मुख्य कागजात खुला छ भने ।
नेभिगेसन उपकरणपट्टी खोल्दछ, जहाँ तपाईँले चयन गर्नुभएको कोटिमा पछिल्लो वा अघिल्लो वस्तु छिटो लान सक्नुहुन्छ । कोटि चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि "Previous" र "Next" बाँणहरू क्लिक गर्नुहोस् ।
To continue the search, click the दोहोरिएको खोजी प्रतिमा नेभिगेसन उपकरणपट्टीको.
सूची बाकस खुला/बन्द
स्विच समावेश दृश्य
तपाईँंको कागजातमा हेडिङहरू र तिनीहरूको सम्बन्धित पाठ द्रुत रिअर्डर गर्नका लागि, चयन गर्नुहोस् "Headings" कोटि सूचीमा, र क्लिक गर्नुहोस् सामाग्री दृश्य प्रतिमा. अब तपाईँं सामाग्रीहरू रिअर्डर गर्नका लागि तान-र-छोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
रिमाइन्डर सेट गर्नुहोस्
एङ्कर <-> पाठ
हाईपरलिंकको रूपमा घुसाउनुहोस्
हाइपरलिङ्क निर्माण गर्नुहोस् जब तपाईँं हालको कागजातमा वस्तु तान्नु र छोड्नुहुन्छ. कागजातको हाइपरलिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् चिजमा जानका लागि जहाँ हाइपरलिङ्क सूचीत हुन्छ.
सम्बन्धको रूपमा घुसाउनुहोस्
चयन वस्तु घुसाउनुहोस् जहाँ तपाईँं हालको कागजातमा तान्न र छोड्नुहुन्छ. पाठ सुरक्षित सेक्सनहरूको रूपमा घुसाइन्छ. लिङ्कको सामाग्री स्वत: अद्यावधिक हुन्छ जब स्रोत परिवर्तन हुन्छ. कागजातमा लिङ्क म्यानुअली अद्यावधिक गर्नका लागि, रोज्नुहोस् गर्नुहोस् उपकरणहरू - अद्यावधिक - लिङ्कहरू. तपाईँं लिङ्कहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्न ग्राफिक्स, OLE वस्तुहरू, सन्दर्भहरू र अनुक्रमणिकाहरूका लागि.
चयन वस्तुको प्रतिलिपि घुसाउनुहोस् जहाँ तपाईँं हालको कागजातमा तान्नु र छोड्नुहुन्छ. तपाईँं ग्राफिक्स, OLE वस्तुहरू, सन्दर्भहरू र अनुक्रमणिकाहरूको प्रतिलिपिहरू तान्न र छोड्न सक्नुहुन्न.
तह प्रवर्धन गर्नुहोस्
तह पदावनत गर्नुहोस्
सबै खुला पाठ कागजातहरूको नाम सूची गर्नुहोस्. नेभिगेटर सञ्झ्यालमा कागजातको सामाग्रीहरू अवलोकन गर्नका लागि, सूचीमा कागजातको नाम चयन गर्नुहोस्. हालको कागजात जुन नेभिगेटरमा प्रदर्शन भएको छ शब्दद्वारा सङ्केत गरिन्छ "active" सूचीमा यसको नाम पछि.
तपाईँं नेभिगेटरमा दायाँ-क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, रोज्नुहोस् गर्नुहोस् प्रदर्शन, र त्यसपछि कागजात क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँंले हेर्न चाहनु भएको थियो.